Khataraha COVID-19 - The Migrant Project
Erayada Furaha u ah hagidda Tahriibayaasha
Halista Jidh ahaaneed
Halista Haweenka iyo Carruurta
Baddelka Nabdagalyada iyo sharciga ah ee Soomaalida
Nolasha Tahriibayaasha Soomaalida ee Yurub
COVID-19 waxa uu halis ku yahay qof kasta laakiin tahriibayaasha ayaa ah kuwa ugu nugul. Ka hot tagga ayaa ah qaabka ugu wanaagan ee lagu xakameeyo cudarka aan aan daawadiisa iyo wax lagu la tacaalo aan garanayn.
Haddii aad tahay tahriibe ama qof magangaladoon ah xilligan uu socdo safmarka COVID-19, waxa uu boggani ku siinayaa macmuulaad guud oo ku saabsan ka hor tagga halista COVID-19 iyo sida looga badbaado.
Khatar noocee ah ayay wajahaan tahriibayashu xilliga safmarka COVID-19?
Tahriibayaashu waxa ay halis aad u weyn ugu jiraan COVID-19 marka ay ku jiraan tahriibka sharci darrada ah ee Yurub maadaama aanay haysan adeegyada biyaha, nadaafadda, iyo daryeelka caafimaad xilliga ay jidka ku jraan. Sida oo kale waxa ay halis kala kulmaan gawaadhida iyo doonyaha la buux-dhaafiyay oo aanay suurtagal ahayn in la kala durko.
Hawlgalka badbaadinta Bani’aadantinnimo ee Badda Medhiteraniyanka ayaa dib loo dhigay sababo la xidhiidha xaaladda deg dega ah ee fayraska Koroona taasi oo ka dhigan in tahriibayaasha dib loogu celinayo Liibiya. Qaramada Midoobay waxa ay ka sheegtay in tahriibayaasha ku sugan Liibiya ay halis ugu jiraan qaaditaanka fayraska Koroona maadaama xeryaha lagu hayaa ay yihiin kuwo la buux-dhaafiyay oo wasakhaysan.
Qaaradda Yurub, tahriibayaal badan ayaa halis ugu jira in ay ku go’doomaan dalalka lagu hakado maadaama ay xidhan yihiin xuduuduhu ama waxa lagu karantiilaa xeryo buux-dhaafay oo ay uu ku yar yahay adeegga caafimaad. Nimaadyada daryeelka caafimaad waxa ay ku jiraan hawlo taasi oo ka dhigaysa in tahriibaha xanuusadaa aanu heli Karin daryeel. Qaar ka mid ah tahriibayaasha ayaa si ku meel gaadh ah dib dhigay warqadahooda maganagalyadoonnimo.
Tahriibayaashu waxa ay khatar ku yihiin faafitaanka fayraska iyo in ay dad kale qaadsiiyaan inta marka ay xuduudaha ka tallaabayaan. Gaar ahaan dadka fayraska qaaday waxa ay gudbin karaan iyaga oo aan lahayn wax calaamado ah.
Maxay yihiin calamadaha iyo astaamaha COVID-19?
Inta badan dadka qaba COVID-19 waxa ay muujiyaan calaamado fara badan.-astaamo khafiif ah ilaa xanuun darn. Calaamadahani waxa ay soo shaac bixi karaan inta dhaxaysa 2-14 maalmood kaddib qaaditaanka fayraska.
Calaamadaha la yaqaan ee caabuqa wax aka mid ah:
Dhadhanka ama urta oo lunta
Neefsasho yar ama naqas qaadasha oo adag
Caalamadaha aan laga wada sinnayn wax aka mid ah yaqyaqsi, matag ama shuban.
Haddii aad isku aragto calaamadaha ama astaamaha COVID-19 waa in aad is karantiishaa 14 cisho, islamarkaana aad la xidhiidhaa daryeelka caafimaad ee maxalliga ah.
Sidee ayaa aan naftayda iyo dadka kale uga ilaalin karaa COVID-19?
Waa in aad joojiso socdaallada aan laga ma maarmaanka ahayn inta uu jiro safmarka COVID-19 si looga badbaaddo ama aad u yareeyo faafitaanka fayraska. Fayarsku waxa uu si weyn ugu fidaa qof-ka-qof, marka qofka caabuqa qabaa uu qufaco, hindiso ama uu hadlo. WhatsApp-ka Hay’adda Caafimaadka Adduunku waxa uu kuu soo gudbinyaa macluumaad ku saabsan calaamdaha WhatsApp iyo sida oo kale sida ay dadku nafahooda iyo midda dadka kale u badbaadin lahaayeen. Lifaaqan dhag sii ooakhriso: The World Health Organization WhatsApp Health Alert
Faraxal joogto ah
Gacmahaaga si joogta ah ugu dhaq biyo iyo saabuun ugu yaraan 20 ilbidhiqsi. Gaar ahaan marka aad ka soo laabato goobaha dadweynaha, ama aad qufacday ama aad hindhistay.
Haddii aan la heli Karin biyo iyo saabuun, waxa aad isticmaashaa nadiifiye ka kooban ugu yaraan 60% alkool ah.
Ka fagow xidhiidhka dhow ee dadka kale ee ka baxsan gurigaaga
Waa in aad joojisaa macaamilka dhow ee dadka kale ee kaaga imanay bannaanka. Haddii aad booqanayso goobaha dadweynaha, waxa ay Hay’adda Caafimaadka Adduunku kugu waaninaysaa in aad ilaaliso masaafo dhan ugu yaraan 1 mitir (3 tallaabo) oo idiin dhaxaynaysa adiga iyo kuwa kale.
Afkaaga iyo sankaaga ku dabool masar marka aad qufacayso ama aad hindhisayso,haddii kale isticmaal xusulkaaga oo aad soo laabto.
Masarka la isticmaalay ku tuur qashin-qubka, si deg deg ahna u faraxalo.
Dabool afka iyo sankaaga
Ku dabool afkaaga iyo sankaaga af-saab xidhan haddii aad joogto goobaha bulsha.
Af-saabyadu kaama caawinayaan in aan aad qaaddo caabuqa laakiin waxa ay gacan ka gaysanayaan in aan aan fayrasku si deg deg ah u fidin.
COVID-19 ma lagu daawayn karaa dhirta guryaha lagu farsameeyo?
Ma jiraan caddaymo sheegaya in daawo-dhaqmeedka ay ka mid yihiin, toonta ama cabitaanka biyha milicda leh ay daawo u yihiin COVID-19. Qaabka ugu habboon ee aad naftaad kaga badbaadin karto COVID-19 waa in aad raacdo talooyinka Hay’adda Caafimaadka Adduunka oo ay ku jiraan faraxalka joogtada ah iyo dhaqan-gelinta kala fogaanshaha bulshada.
Afrikaanku adkaysi ma u leeyahiin Fayraska?
Waaya-aragnimooyinku ma muujinayaa inuu jiro adkaysi loo yeesho Fayraska Koroona. Waxa jira dad badan oo ku jira xeryaha qaxootiga ee Geeska Afrika kuwaasi oo laga elay Fayarska Koroona. Cilmi baadhista Hay’adda Caafimaadka Adduunku waxa ay soo bandhigtay in ku dhawaad 200,000 oo qof oo Afrika ku nool ay halis ugu jiraan in ay u dhintaan COVID-19, haddii aan la xakamayn. Si guud COVID-19 waxa uu u muuqdaa in uu qun yar ugu fidayo Afrika marka loo eego dalalka kale maadaama ay bulshadu u badan tahay dhalinyar, iyo heerka cayilka dadka oo hooseeya.